Apple: Macluumaadka guuritaanka Macluumaad cusub oo bilaash ah - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Apple: Macluumaadka u gudbida Mac free oo cusub
Apple: Macluumaadka u gudbida Mac free oo cusub
Adeeggii hore u soo dalbaday 99 euros hadda waa lacag la'aan, ugu yaraan Maraykanka.
Beddelka adeegga dhintay Hal hal ilaa hal taas oo u ogolaatay iibsadaha cusub inuu ogaado wax walba oo ku saabsan Mac-brand Mac cusub iyo macluumaadka wareejinta aaladiisii ​​hore ee Apple, shirkadda tufaaxu waxay tijaabin dalab lacag la'aan ah ee Maraykanka.
Muujin dhinaca dadka isticmaala
Markii hore 99 €, tababarka fool-ka-fool ah oo lala yeeshay shaqaale Apple ah oo aan laga helin 2015, laakiin adeegga wareejinta macluumaadka lama joojin. Marka la eego 100 € oo loogu talagalay beddelaad laga yaabo in laga sameeyo qalabka Kaaliyaha Haajiraadda Laga soo bilaabo macOS, adeeggu wuxuu ahaa mid qaali ah.
Apple hadda wuxuu doortay inuu doorto bilaash, Mareykanka oo kiis kasta, khidmadaha socdaalka. MacGeneration ayaa sheegay in tan iyo markii ganacsiga Macmiilka lagu qalabeeyay USB-C, maneuver waxaa badanaa la siiyaa macaamiisha, waxay leeyihiin xiriir kala duwan oo ku saabsan qalabkii hore.
MacOS 10.15 waxay marti gelin doontaa muusikada cusub, Podcasts, Buugaagta iyo barnaamijyada Apple TV
Apple: Huawei waxay ku siin kartaa chips 5G iPhone ee xiga
Maya MacBook Pro 17 inji ka hor 2021?
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/apple-la-migration-des-donnees-vers-un-nouveau-mac-gratuite-312644
Akhri casriga ah: ka dib Huawei, Samsung ama Xiaomi, Sharp ayaa galaya qoob ka ciyaarka